Ny androaniko | Lalao
[Lalao ] 26 Aogositra, 2009 16:23
izao zany kou, zzzzzzzzzzz beuh !
Izany hoe ilay tagy izany raha atontaly dia hitsongolohana ny rehetra momba ny namana izy ity e !
[Lalao ] 25 Febroary, 2009 19:16
Hafatra ho an' i news, kdaomba, finoanaranoray...
Voan'ikala Jogany tary andrefan-trano tary indray aho ka indro tonga mitondra ny andiany voalohany amin'ny resa-tagy amin'ity taona 2009 ity.
Antsoina hanefa adidy amin'izany ianareo andriamatoa sy ramatoa isany izay voalaza anarana eto ambany :
- tritriva mangamaso
Ato amin'ny blaogy org - ko ny lalàna mifehy ny lalao sao dia roahin'i sefo eto raha minantsana amin'ny teny faranitsihay.
Mahavità be rizareo, dia misaotra a !
[Lalao ] 23 Jiona, 2008 17:15
Ilay Ambohipihaonana tamin'ny asabotsy.
Efa be ny voalaza tsy misy kianina ireny fa dia manantitra hatrany ny fisaorana ny rehetra.
Misaotra an'i jogany efa namoaka ilay tatitra fa ity izany dia somary nodioviko kely ilay izy (tonga indray ikala tsisy asa !!!), nesorina daholo ny kabary ambony vavahady nataon'i Botlives (!mialatsiny), nesorina ireo fivezivezena be tsisy farany tamin'ireo namana niditra sy nivoaka (...est entrée dans la salle, ... est sortie de la salle, tss).
Mampiomana aho fa lava dia lava izy ao (55 pejy) fa dia ataovy fanalana andro fa efa tonga izao ny fotoam-pialantsasatra, fa dia lokin'ny hehy irery aho namaky azy tao an (mba vakio fa tsy mamono antoka ny mahita ny senina be tao, misy resaka tsy mitohoka, misy mitaraina foana, misy be zesta,...Ikalamenavolo aza kay i sipagasy namela ny solosainany tany antranony nirehitra fotsiny dia lasa izy niasa dia any izy niditra tamin'ny anarany hoe sipagasy, tsss).
Aleo ny tatitra no hilaza azy e, mazotoa daholo : (tsindrio ilay sary)